किन गइन्छ मन्दिर ? थाहा पाउनुहोस् मन्दिर जानैपर्ने यी ७ कारणहरु : – Sadhaiko Khabar
किन गइन्छ मन्दिर ? थाहा पाउनुहोस् मन्दिर जानैपर्ने यी ७ कारणहरु :
प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक १५, २०७८ समय: ८:४३:०८
धर्ममा धेरै कुराहरू वैज्ञानिक आधारमा पनि तय गरिएको छ र तीमध्ये मन्दिर जानु पनि एक हो । चाहे मानिसहरूले मन्दिर जानुलाई धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेता पनि यसले स्वास्थ्य सम्बन्धि लाभ पनि पुर्याउँछ । धार्मिक कारणहरू बाहेक स्वास्थ्यको लागि पनि मन्दिर जानु राम्रो मानिन्छ । यसकारण मन्दिर जानुको ७ स्वास्थ्य लाभ बारे जानकारी राख्नुहोस् र यसपछी तपाई पनि मन्दिर नियमपूर्वक जान शुरु गर्नुहुनेछ ।
बिहान हिँडेर मन्दिर जाँदा शारिरिक कसरत पुगेर हाम्रो शरिरलाई सकारात्मक ऊ’र्जा प्राप्त भई स्वस्थ बनाउन मद्दत पुग्दछ । मन्दिरमा निधारमा तिलक लगाउँदा हाम्रो दिमा’गको एक विशेष भागमा द’वा’व पर्छ । यस पोइन्ट द’वा’व पर्ने हुँदा जसले ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत मिल्छ मन्दिरको घन्टीको आवाज पनि स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ ।
एक रिसर्चको अनुसार, जब हामी मन्दिरमा घन्टी बजाउँछौँ, तब यसको आवाज ७ सेकेण्ड सम्म हाम्रो कानमा गुन्जिन्छ, जसले हाम्रो मस्ति’ष्क र शरीरलाई आराम प्रदान गर्ने पोइन्ट सक्रिय हुन्छ ।
रुघाखोकीबाट पनि बचाउँछ । मन्दिर गएर हात जोडेर प्रथना गर्नाले हात र औँलाको विशेष पोइन्टमा द’वा’व पर्छ । यसबाट शरीरमा इम्युनिटी बढ्छ । मन्दिरको भित्र खाली खुट्टा जानुपर्ने हुन्छ र यसै नियमको माध्यमले पवित्र स्थानको सकारात्मक ऊ’र्जा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ । यसबाट खुट्टाको प्रे’श’र पोइन्ट्समा द’वा’व पर्छ, जसबाट BP नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्छ ।
मन्दिरमा रहेको कपूर र हवनको धुवाँले ब्याक्टेरियालाई न’ष्ट गर्छ । यसबाट भाइरल इन्फे’क्शन हुनबाट बँ’च्न सकिन्छ । मन्दिरमा बज्ने शंखको आवाजले हामीलाई आराम प्रदान गर्छ र यसबाट त’ना’व हट्छ । नियमित मन्दिर जाने बानीले रुटिन बन्छ र कुनै अदृ’श्य श’क्तिको साथको आभासले हामी कहिलै ए’क्लोपन महसूस गर्दैनौँ ।
यसैगरी त्यसो त भगवान् गणेशलाई पूजामा धेरै कुरा चढाइन्छ तर दूबोको चाहिँ विशेष महत्त्व छ । दूबोविना उहाँको पूजा नै पूर्ण हुँ’दैन । अनि तुलसी चाहिँ भगवान् विष्णुको प्रिय बिरुवा हो । तुलसीलाई विष्णुको एक रूप नै मानिन्छ ।
तर गणेशजीलाई तुलसी अप्रि’य लाग्छ । गणेश पूजनमा तुलसीको प्रयोग व’र्जि’त छ । दूबोका सम्ब’न्धमा एउटा कथा भेटिन्छ । कथाअनुसार प्राचीन समयमा अनलासुर नामक असुर थियो । उसले धर्ती र स्व’र्गमा आ’तं’क फैलाएको थियो । अनलासुर ऋषिमुनि र सर्वसाधारणलाई जिउँदै निल्थ्यो ।
अ’सु’र’बाट त्र’स्त भएर देवराज इन्द्रसहित सबै देवीदेवता र प्रमुख ऋषिमुनि भगवान् महादेवसँग प्रार्थना गर्न पुगे । अ’न’ला’सुरलाई अ’न्त्य गर्न उनीहरूले महादेवसँग अ’नु’रो’ध गरे तर महादेवले असु’रको अ’न्त्य गणेशजीले गर्ने बताउनुभयो । अ’न’ला’सुरसँग यु’द्ध गर्न गणेशजी जानुभयो । असुरले उहाँलाई नि’ल्न खोज्यो तर उल्टै गणेशजीले अ’सु’र’लाई नि’ल्नु’भयो । असुरलाई नि’लेपछि गणेशजीलाई बे’स्सरी पे’ट पो’ल्यो । धेरै प्रकारका उ’पा’य गरियो र पे’टको ज’ल’न शा’न्त भ’एन ।
त्यसपछि कश्यप ऋषिले २१ मुन्टो दूबोको गाँठो बनाएर गणेशलाई खान दिनुभयो । दूबो खाएपछि गणेशजीको पी’डा श’मन भयो । त्यतिखेरदेखि नै श्रीगणेशलाई दूबो चढाउने परम्परा शुरु भएको हो । गणेशजीलाई तुलसी किन चढाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा पनि एउटा कथा भेटिन्छ । कथाअनुसार प्राचीन समयमा तुलसीले गणेशजीसँग विवाहको प्रार्थना गरेकी थिइन् । तर गणेशजीले मा’न्नु’भएन ।
रि’सा’ए’की तुलसीले गणेशजीलाई दुईवटा विवाह होस् भनी श्रा’प दिइन् । गणेशजीलाई पनि रि’स उठ्यो र तिम्रो विवाह एक असु’रसँग होस् भनी श्रा’प दिनुभयो । रा’क्षससँग विवाह हुने श्रा’प सुनेपछि तुलसीले गणेशजीसँग मा’फी मागिन् । त्यसपछि गणेशजीले तिम्रो विवाह शंखचूर्णसँग हुनेछ तर तिमी भगवान् विष्णुको प्रिय हुनेछौ अनि कलियुगमा मानिसहरूलाई मो’क्ष दिनेछौ तर मेरो पूजा गर्दा तिमीलाई चढाउनु अशु’भ हुन्छ भन्नुभयो ।